‘तारेभीरमा बुकी’सँग रमाउँदै बी.बी. र सुमन (श्रव्यदृश्यसहित) | eAdarsha.com
‘तारेभीरमा बुकी’सँग रमाउँदै बी.बी. र सुमन (श्रव्यदृश्यसहित)
सुप्रसिद्ध संगीतकार बीबी अनुरागी र गीतकार सुमन श्रापित बीचको साङ्गीतिक जोडी निकै जम्दै आएको छ ।
उनीहरू गीतकार र संगीतकारको‌ जोडीका रुपमा मात्रै होइनन् । यी दुईको‌ सहकार्यका थुप्रै गीत नेपाली गीत संगीत बजारमा कालजयी बनेका छन् । बसाईका हिसाबले अनुरागी काठमाडौँ बस्दछन त श्रापित‌ पोखरा तर दुई बीच मित्रता र साङ्गीतिक सहकार्यमा निकै निकट छ ।
अनुरागी देशकै अब्बल संगीतकार हुन् उनका महिना मै दर्जनौं गीत रेकर्ड हुन्छन् भने श्रापित राजधानी बाहिर रहेर अत्याधिक गीत रेकर्ड गराउने चिरपरिचित गीतकार हुन् । यसैक्रममा यी दुईको‌ शब्द संगीतमा पछिल्लो साङ्गीतिक कोसली तारेभीरमा बुकी बजारमा आएको छ ।
जसमा धिरेन कुमार रोकाया र मेलिना राईको‌ आवाज रहेको छ ।
रोजगारीको शिलशिलामा कोरियामा रहेका रोकायाको‌ आवाज कोरियाकै स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो भने बाँकी काम प्रिज्म डिजिटल काठमाडौंमा भएको हो ।
तारेभीरमा बुकी अहिलेको चलन चल्तीको रमाइलो डान्सिङ शैलीको गीत हो । यस गीतमा गीतकार सुमन श्रापितले माया लाउनु‌ पाप होइन, अपराध होइन, माया बिना संसार अछुतो रहन पनि सक्दैन तसर्थ माया लाउनेहरुलाई माया लुकीछिपी होइन हाक्काहाक्की लाउनु पर्छ भनेर सुझाएका छन् ।
गीतमा संगीतकार बीबी अनुरागीकै संगीत संयोजन रहेको छ भने गीतको मिक्सिङ माष्टरिङ‌ श्यामश्वेत रसाइलीले गरेका छन् ।
म्युजिक भिडियोमा कबिर खड्का र सारिका केसीको अभिनय देख्न सकिन्छ । रक कौशलले छायांकन गरेको यस भिडियोलाई पदम सुवेदीले सम्पादन गरेका हुन्। माधव श्रेष्ठ सहनिर्देशक रहेको भिडियोलाई शिव विकको कोरियोग्राफी र निर्देशनमा तयार पारिएको हो।